Yakachipa Hot-mhepo Chitofu cheOganiki & NPK Komputa Fertilizer Granules Kuomesa Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Gasi-mafuta Hot-mhepo chitofu inogara ichishanda nemuchina wekuomesa mumutsetse wekugadzira fetiraiza.
Chii chinonzi Hot-air Stove?
Iyo Hot-mhepo chitofu inoshandisa iyo peturu kupisa zvakananga, inoumba kupisa kuputika kuburikidza nepamusoro yekuchenesa kurapwa, uye inonongedzera zvakananga izvo zvinhu zvekupisa uye kuomesa kana kubheka. Chave chinotsiva chigadzirwa chemagetsi kupisa sosi uye yechinyakare hwemhepo simba kupisa sosi mumaindasitiri mazhinji.
Chii chinonzi Hot-air Stove inoshandiswa?
Iko kushandiswa kwemafuta kwe Hot-mhepo chitofu ingangoita hafu yekushandisa mweya kana zvimwe zvinopisa zvisina kunangana. Naizvozvo, iyo yakanangana yakakwira-kuchenesa mweya unopisa unogona kushandiswa pasina kukanganisa mhando yechigadzirwa chakaomeswa.
Mafuta anogona kugoverwa mu:
1 Mafuta akasimba, senge marasha uye coke.
Qu Mafuta emvura, akadai sedhiziri, mafuta anorema, mafuta anokonzerwa nedoro
Fuel Mafuta emafuta, akadai segasi remarasha, gasi rechisikigo, uye gasi remvura.
Iyo mweya unopisa unoburitswa nemafuta ekupisa maitiro kuita kusangana nemhepo yekunze uye sanganisa kune imwe tembiricha, uye wozouya mune yekuomesa muchina wakanangana, saka iyo yakasanganiswa inopisa mweya izere inosangana neiyo fetiraiza granules kutakura hunyoro. Kuti ushandise kupisa kwekupisa kupisa, seti yakazara yemafuta emagetsi anofanirwa kushanda pamwechete, senge: marasha anopisa, anopisa mafuta, anopisa gasi, nezvimwe.
Shanda Musimboti weHot-air Stove
Mukuomesa uye nekunyorova granulation maitiro, inopisa mweya chitofu chakakosha zvine chekuita nemidziyo, iyo inopa inodiwa kupisa sosi kune inooma system. Iyo yakateedzana gasi / mafuta anopisa mweya chitofu ine maficha eakanyanya tembiricha, yakaderera kumanikidza, chaiyo tembiricha kudzora uye yakakwira mashandisiro emagetsi ekupisa. Iyo yemhepo pre-hita inogadzirirwa mumuswe wemoto mukuru unopisa chitofu kuvandudza kugona kwe Hot-mhepo chitofu. Iyo inoratidzira kudziya pamusoro inotora yakakwira inonzwisisika chiyero pahwaro hwekuomarara kuverenga kuverengera izere kupisa kupisa kweiyo muviri wevira uye neakanyanya kupisa kupisa kweHot-mhepo chitofu.
Zvimiro zveHot-air Stove
Muedzo weiyo Hot-mhepo chitofu neyakagadzirwa fetiraiza inogadzira inoratidza kuti nzvimbo yekupisa yakakura zvakakwana uye iyo inopisa blast vhoriyamu yakakwana, iyo inoderedza zvakanyanya mutsauko wekupisa pakati pemusoro uye muswe we muhombe rimwe humburumbira kuomesa muchina, kuitira kuti hunyoro hweiyo komputa fetiraiza inogona kudzorwa zviri nyore mukati meiyo yakatarwa renji. Chokwadi chakaratidza kuti kushandiswa kweHot-mhepo chitofu haigone chete kudzora hunyoro hwemagirosa mushure mekuomesa, asi zvakare kugadzirisa dambudziko hombe remushonga wefetireza, uye panguva imwechete kudzora kushandiswa kweanorwisa-caking mumiririri kudzikisa mutengo wekugadzira.
Hot-mhepo Chitofu Vhidhiyo Ratidza
Hot-air Stove Model Sarudzo
Rated kupisa kwese
Thermal kunyatsoshanda （%）
Marasha Kunwa (kg / h)
Simba Rokushandisa （kw / h）
Mhepo yekupa vhoriyamu (m3 / h)
Pashure: Michina Fertilizer Kuchengeta Machine
Zvadaro: Maindasitiri Akakwira Kupisa Kunopisa Dhizaini Fani